Mogadishu Journal » Struijk Elliott oo ankle kajabay ciyaartii Leeds
Gantaalkii Pascal Struijk ee dhaawac xun u geystay Harvey Elliott xitaa uma qalmin jaale, sida uu sheegay milkiilaha Leeds United Andrea Radrizzani.
Elliott waxaa soo gaaray dhaawac halis ah oo lugta ka soo gaaray ka dib markii uu taakal ka helay Struijk markii uu ku orday garabka midig, iyadoo Mohamed Salah uu si qallafsan ugu baaqay dhakhtarka si uu u bixiyo daweyn.
Daafaca Leeds ayaa kaarka cas oo toos ah loo taagay taakalka daqiiqadii 60 -aad, halka Elliott lagu qaaday bareelo. Da’yarka Liverpool ayaa durba soo dhigay bartiisa Instagram: “Waad ku mahadsan tahay dhammaan fariimaha. Wadada soo kabashada. YNWA.”
Radrizzani ayaa ka qoomameeyay in Elliott uu soo gaaray dhaawac halis ah laakiin ma uusan dareemin in garsoore Craig Pawson uu qaatay go’aanka saxda ah isagoo ciyaarta ka saaray Struijk.
“Sida iska cad, shilka, way ku adkaatay isaga [Elliott] waxaana u rajaynayaa wiilka caafimaad buuxa, waxaan rajaynayaa inaan dhakhso u heli karno taas, laakiin tani waa qayb ka mid ah kubadda cagta,” ayuu Radrizzani u sheegay Sky Sports.
“Si aad daacad u noqoto haddaad fiirsato fiidiyaha, waxaad arki doontaa in Strujik uu jiifo lugta bidix oo ay ku dhacday si kadis ah, sidaa darteed ma ahayn taakal hore loo sii qorsheeyay sidaa darteed waxaan u malaynayaa in qiimaynta taakalku uu khalad ka ahaa garsooraha.
“Runtii way adag tahay inaan qaato kaarka gaduudan sidaas oo kale aniga ahaan xitaa jaale ma noqon doonto, laakiin runtii waan ka xumahay wiilka oo dhaawaciisu wuu ku adkaan karaa”.
Markii la weydiiyay inuu fahmay in taakalka Struijk uu halis geliyay Elliott, Radrizzani ayaa ku jawaabay: “Haa, waan fahmay, ma xakamayn karno nooca dhaawaca ee aad garoonka ku hesho, maxaa yeelay waa qayb ka mid ah ciyaarta.
"Laakiin haddii aad fiidiyaha daawato waqtiyo ku filan waxaad fahamsan tahay inay shil tahay. Strujik ayaa kubbada helaya, laakiin sida iska cad waan ka xumahay isaga inay taasi dhacday."
Tababaraha Leeds Marcelo Bielsa ayaa kalsooni ku qabay inaysan jirin wax xumaan ah oo ku dhacday Struijk laakiin wuxuu ka xumaaday inuu arko Elliott oo dhaawacmay.
"Aad baan uga qoomameynayaa wixii dhacay, waxaan jeclaan lahaa inaysan dhicin. Si taasi u dhacdo ciyaaryahan walba waa murugo. Ciyaaryahan da 'yar oo ka ciyaara heer aad u sarreeya xitaa," Bielsa ayaa u sheegay BBC.
“Waan hubaa in laacibkeyga uusan niyadda ku hayn inuu si uun u dhibaateeyo.
“Taakalku wuxuu ahaa mid cad laakiin si cad dardargelinta sida uu ciyaartoygeena u dhaqaaqay ayaa sababtay, sinaba uguma talagalin inuu waxyeello u geysto qofka ka soo horjeeda”.
Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo Mudo kadib dib loo furay (Sawirro)